Xaaladaha Qooyska ee Ilaalinta Qawaniinta Cadaalada Guriyeenta | Pine Tree Legal Assistance
Fair Housing Act waa sharci qaran oo mamnuucaya takoorka dadka ka tirsan kooxaha sharciga difaacaya, kolka ay codsadaan kiro ama gadasha guri. Waxyaabaha sharciga Fair Housing Act daafcaya waxa ka mid ah isirka, midabka, diinta, jinsi, asal qarameedka qofka, naafo, iyo heerka qoyska, ama dadka da’dooda ka hooseysa 18. Tusaalooyinka takoorka guriyeenta waxaa ka mid ah in qof sharciga difaacayo loo diido in guri laga kireeyo iyada oo la tixraacayo inay ka mid yihiin dadka sharciga daafacya ama xayeysiin lagu doorbidayo oo muujineysa inaysan dadka nooca ah soo codsan guriyeeyn. Waxaa jira tusaalooyin badan, laakin waa takoor sida uu sharciga FHA uu qabo in dadka si kala badalan loola dhaqmo goorta guriyeeynta, sababa la xiriiro ka tirsanaashahooga kooxda la daafaca.
Milkiilayaal badan ama bixiyaasha guriyaha ayaan aqoonin mas’uuliyadaha ka saaran qooysaska carrurta leh ama aan xitaa ogeyn in qooysaska carrurta leh ka mid yihiin kooxaha sharciga daafaca sida shuruucda guryaha ee khuseeya takoorka ay qabaan sidaa ayeysan uga dhigi karin guriyaha kuwo aan la heli karin amaba ugu diidi karin hooy sabab ah inay carruur leeyihiin darteed. Carrurtu waxay la noolan karaan waalidka dhalay, waalidka guurka ku yimid, waalidka barbaariya, awoow/ayeeyo, ama qof qaan gaar ah oo sharci u leh hayntooda. Wax isbedel ma sameeyneyso in dadka qaangarka ee qooyska ka mid ah ay yihiin kuwo is qabo, doob, mid laga dhintay,ama kala maqan. Carrurta waa inay 18 da’dooda ka yartahay, laakin ma ahan inay ka mid yihiin guri weli. Qooysaska uurka ama ku guda jira korsasha ilmo aya iyagana ka mid ah kuwa sharcigu ilaaliyo.
Shuruucda Fair Housing waxay sidoo kale ka hortagayaan bixiyayaasha inay soo rogaan shuruudo gaar ah ama inay kireystayaasha carrurta leh kusoo rogaan xaalado. Tusaale, milkiilayasha waxa dhici karta inaysan qoysas carrur leh dejin qeyb ka mid ah guryaha kirada, ay xayiraado caqli gal ahayn saaraan tirada dadka ku noolanaya hooyga, xadadaan helida adeegyada madadaalo ee ay helaan kireystayaasha kale, ama ay ka xanibaan hooyga sababo la xiriiro amaanka.
Lakiin, hooyga qaar waa laga saamaxay shuruucda Fair Housing. Waxaa ka mid ah samaxaada hooyga loo qoondeeyey Dadka Waayeelada. Mid kale waxaa la yiraahdaa “Saamaxada Marwo Murphy”. "Marwo Murphy" waa malaynta carmalo da ah taas oo u badeshay qeyb ka mid ah gurigeeda qolal kiro si ay u kordhiso dhaqaalaheeda xadadan. Saamaxada waxay oraneysa haddii ay hooyga kirooyinka yihiin afar ama qolal kiro oo yar oo milkalaha deganyahay mid ka mid ah, waa laga saamaxaya sharciga FHA. Dhacdadaan, Marwo waxay yeelan kartaa xulasho. Shuruucda Maine Fair Housing aya sido kale samaxaya hooyga labada qol marka uu milkiilaha deganyahay mid ka mid ah, ama kireynayo guri afar qol ah marka uu deganyahay qol mid ka mid ah.
Haddii aad u maleyneyso in milkiilaha gurigu si sharci daro ah kuu takooray isagoo eegaya xaalada qooyska la soo xiriir Pine Tree Legal si aad u ogato inaan ku caawin karno. Maclumaadka xiriirka gal www.ptla.org.
Ama waxaad la xiriiri karta si toos ah mid ka mid xafiisyadan:
Ogeysiintan waxa maalgaliyey Waaxda Guriyeeynta iyo Horumarinta Magaalooyinka ee dalka Mareekanka (HUD) sharciga hoos yimaada Fair Housing Initiatives Grant. Macluumadka la bixiyey ma khuseeya aragtida HUD.